Ukuhlaselwa Isifuba Somoya - Izimbangela - Ukuhlaselwa Isifuba Somoya - Izimbangela Nezimpawu
Ukuhlasela Kwe-Asthma - Izimbangela Nezimpawu
Ikhaya>Ukuhlasela Kwe-Asthma - Izimbangela Nezimpawu
Ukuhlasela Kwe-Asthma - Izimbangela NezimpawuIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-04-09T13:28:55+02:00
Isifuba somoya sithinta cishe 235m abantu emhlabeni wonke, kufaka phakathi abadala kanye nezingane. Izimpawu ze-asthma zingalawulwa kahle yimithi ejwayelekile kanye nokukhethwa kwendlela yokuphila, kepha kwesinye isikhathi kwenzeka i-Asthma Attack - lapho izimpawu ziba zimbi khona ngokuzumayo.
Funda ukuze uthole amaqiniso ngokuhlaselwa yisifuba somoya, ukuthi kubangelwa yini, izimpawu okufanele uzibheke kanye nezimbangela ezivamile zokuhlaselwa yisifuba somoya.
Kuyini ukuhlaselwa yisifuba somoya?
Ukuhlaselwa yisifuba somoya kwenzeka lapho izimpawu zakho ezivamile zesifuba somoya ziba zimbi ngokungazelelwe. Imisipha ezungeze imigwaqo yakho yomoya iyaqina - eyaziwa njenge-bronchospasm - ulwelwesi ezindleleni zakho zomoya luyavuvukala futhi luvuvuke bese ukhiqiza amafinyila amakhulu kunokujwayelekile.
Ngokubambisana i-bronchospasm, ukuvuvukala nokukhiqizwa kwamafinyila kudala izimpawu zokuhlaselwa yisifuba somoya. Thola ngezansi okufanele ukwenze uma wena noma umuntu omthandayo ehlushwa yisifuba somoya .
Uma i-asthma yakho ilawulwa ngokusebenzisa isivikeli esinqunyiwe kanye ne-reliever inhalers noma eminye imishanguzo ye-asthma, ungahamba isikhashana ngaphandle kokuhlaselwa yisifuba somoya. Kepha kwesinye isikhathi ukuvezwa yizimbangela ezivamile zesifuba somoya, njengomoya obandayo, intuthu noma nokuzivocavoca umzimba, kungadala ukuhlaselwa yisifuba somoya.
Ukuhlaselwa yi-asthma kungaba mnene noma kube nzima. Kuyinto ejwayelekile ukuhlangabezana nokuhlaselwa yisifuba somoya okuncane, okungahlala kuphela imizuzu. Kodwa-ke, ukuhlaselwa yisifo se-asthma okunzima kungahlala kusuka emahoreni kuye ezinsukwini futhi kungaba yisimo esiphuthumayo sezokwelapha.
Izimpawu zokuhlaselwa yisifuba somoya
Izimpawu zokuhlaselwa yisifuba somoya zibandakanya:
Umuzwa wengcindezi noma ukuqina esifubeni sakho
Ukungatholi sizo ekusebenziseni i-inhaler evamile ye-blue reliever
Umbala uphaphathekile, kwesinye isikhathi unezindebe noma izinzipho eziluhlaza okwesibhakabhaka.
Izimpawu zokuhlasela i-asthma azihlali zivele ngokungazelelwe. Kwesinye isikhathi zingafika kancane futhi ngokuzinza, ngaphezulu kwamahora amaningi noma izinsuku. Lesi esinye sezizathu zokuthi kungani kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ziyini izimpawu, ngoba kungakusiza ukuvimbela ukuhlaselwa yisifuba somoya okwenzeka ngokugcwele.
Yini okufanele uyenze lapho uhlaselwa yisifuba somoya?
Uma une-asthma, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi yini okufanele uyenze-futhi ungayenzi - uma uhlaselwa yisifuba somoya.
Hlala ume endaweni ekahle (musa ukulala phansi) futhi ukhulule noma yiziphi izingubo eziqinile. Ukuncika phambili kancane noma ukuhlala emuva esihlalweni kungasiza ukuphefumula kwakho.
Phefumula kancane futhi ujule.
Uma ungenayo i-inhaler yakho, shayela i-ambulensi. Shayela u-999 e-UK, u-911 e-US noma u-112 e-Europe Union.
Uma unayo i-reliever inhaler yakho (imvamisa iluhlaza okwesibhakabhaka), thatha ukukhukhumeza okukodwa njalo ngemizuzwana engama-30-60 kuze kufike kokufutheka okuyishumi. Uma unedivayisi yesikhala ongasinikeza, sebenzisa lokho ukuphatha i-inhaler, ngoba ingasiza umuthi ukuthi ungene emikhondweni yakho yomoya kahle.
Uma usebenzisa i-inhaler yakho futhi uzizwa ubi kakhulu noma ungazizwa ungcono ngemuva kokudonsa oku-10, shayela abezimo eziphuthumayo.
Uma ulinde i-ambulensi futhi ingakafiki kungakapheli nemizuzu engu-15, sebenzisa i-reliever inhaler yakho futhi uthathe ukudonsa okukodwa njalo ngemizuzwana engama-30 kuye kwangama-60, kuze kufike ekukhuthazeni okuyishumi.
Hlala uzolile ngangokunokwenzeka, njengoba ukwethuka nokukhathazeka kungenza izimpawu zakho zibe zimbi kakhulu.
Kunzima ukubikezela kahle ukuthi ukuhlaselwa yisifuba somoya kuzokwenzeka nini, ngakho-ke kubalulekile ukuxoxa ngesimo sakho nomndeni wakho, abangane nomqashi. Kubalulekile ukuthi bonke bajwayelane kangcono nokwenzekayo nokuthi bangasabela kanjani futhi basize uma uhlaselwa yisifuba somoya.
Ngokufanayo, kubalulekile ukuthi izikole futhi othisha bayazi lapho ingane ine-asthma futhi yazi ukuthi ingasisingatha kanjani isimo uma kuhlasela i-asthma kwenzeka ngezikhathi zesikole. Ukuyinikeza ikhophi yohlelo lwesifuba somoya yengane yakho kungaba wusizo.
Izimpawu kubantu abadala
Kunezimpawu ezithile zokuhlaselwa yisifuba somoya okungahluka, kuye ngokuthi ungumuntu omdala noma ungumntwana.
Endabeni yabantu abadala, izimpawu zingafaka:
Umuzwa wokuqina noma ukucindezela esifubeni sakho
Imisipha yentamo noma yesifuba eqinile, edala isikhumba nezicubu ezithambile odongeni lwesifuba sakho esikhunjeni - lokhu kubizwa ngokuthi ukuhoxiswa kwesifuba
Ukuzizwa ukhathele, ukwesaba noma ukuhogela - lokhu kungaba uphawu oluyisixwayiso sokuqala kokuhlaselwa yisifuba somoya okuseduze.
Ezinganeni ezincane kwesinye isikhathi kungaba nzima ukuthola izimpawu nezimpawu zesifuba somoya. Kungenzeka bangabi nazo zonke izimpawu - kungabonakala sengathi banomkhuhlane obandayo nensali.
Izimpawu ezibalulekile ze-asthma okufanele uzibheke ezinganeni zifaka:
Umsindo ovunguzayo noma wempempe, ikakhulukazi lapho bephefumula
Ubunzima bokuphefumula - ungaqaphela ukuthi amakhala abo abhazabhaza noma isisu sabo sihamba kakhulu lapho bephefumula
Ngokushesha okungazelelwe, ukuphefumula okungajulile.
Ezinye izingane zingase futhi zithi ukuqaqamba kwesisu noma kwesifuba.
Izimpawu zokuhlasela kwesifuba somoya
Ukuhlaselwa yisifuba somoya kuyisimo esiphuthumayo sezokwelapha - kuzofanele ufune usizo lwezokwelapha ngokushesha bese uya esibhedlela.
Izimpawu zokuhlasela kwe-asthma okufanele ziqaphele zifaka phakathi:
Ukuphefumula okusheshayo okunganciphisi ngokusebenzisa i-reliever inhaler
Ukuphefumula ngokweqile - ukungakwazi ukuhogela noma ukukhipha ngokuphelele
Ukwehluleka ukukhuluma ngemisho ephelele
Ukudideka noma ukuyaluza
Ukuthuthukisa umbala ohlaza okwesibhakabhaka ebusweni, ezindebeni noma kuzinzipho.
Uma ungafuni ukwelashwa ngokuhlaselwa yisifuba somoya, impilo yakho ingaba sengozini. Thola okuningi mayelana ne-asthma ebukhali ngokufunda umhlahlandlela wethu ku i-asthma enamandla.
Izimpawu ngemuva kokuhlaselwa yisifuba somoya
Ukuthi uzizwa kanjani ngemuva kokuhlaselwa yisifuba somoya kuzoya ngokuthi ukuhlaselwa kwakukubi kangakanani nokuthi kwakubangelwa yini.
Uma ngabe ukuhlaselwa kudalwe yisicasuli, njengesimo sezulu esibandayo, ukungcola noma izixwayiso ezifana ne-pollen, uboya bezilwane noma uthuli, kufanele ululame ngokushesha.
Uma ukuhlaselwa yisifuba somoya kubangelwe ukutheleleka, ukutheleleka okunjalo okuphezulu komoya, kungathatha isikhathi eside ukuthi uphinde ululame. Ungaba nezimpawu ezifana nokukhathala nokukhathala ngemuva kokuhlaselwa yisifuba somoya.
Landela noma yisiphi isiqondiso sokutakula osinikezwe udokotela noma uchwepheshe wezokwelapha. Phumula, phuza uketshezi oluningi, thatha imishanguzo yakho futhi uhambele noma yimaphi ama-aphoyintimenti adingekayo.
Uma ungakaze ubonane nodokotela wakho noma umhlengikazi wesifuba somoya ukuze uthole i-aphoyintimenti ejwayelekile muva nje, bhuka eyodwa ngokushesha okukhulu.
Ukumisa kanjani ukuhlaselwa yisifuba somoya ngaphandle kwe-inhaler?
Uma kutholakala ukuthi une-asthma, kufanele uqiniseke ukuthi une-inhaler nawe ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke, uma kwenzeka isimo esibi kakhulu futhi uhlangabezana lapho ungenayo i-reliever inhaler nawe, kunezinyathelo ezingokoqobo ongazithatha ukunciphisa izimpawu zakho.
Hlala uzolile ngangokunokwenzeka - thola indlela yokwehlisa noma yikuphi ukukhathazeka, njengokubamba isandla somunye umuntu noma ukudlala umculo
Hlala uqonde - lokhu kuzokusiza ukugcina imigwaqo yakho yomoya ivulekile
Phefumula kancane futhi ujule - ukwehlisa ukuphefumula kwakho kunganciphisa ubungozi bokubamba umoya
Uma okuthile kubonakala kudale isifuba somoya, njengokuphefumula emoyeni obandayo noma ukuvezwa intuthu, suka kuleso sifo
Zama izivivinyo zokuphefumula - inqubo yokuphefumula yezindebe elandelwayo ingakusiza ukubhekana nokuphefumula okuncane
Yiba nesiphuzo esine-caffeine - kukhona okunye ubufakazi ukuphakamisa ukuthi i-caffeine ingasiza ukuthuthukisa ukusebenza komoya kuze kube ngamahora amane.
I-asthma ingaba yisimo esisongela impilo, ngakho-ke okungenani, phokophela ukugcina i-spare reliever inhaler esikhwameni sakho, ilokha emsebenzini noma ephaketheni lejazi.
Kuhlala isikhathi esingakanani ukuhlaselwa yisifuba somoya?
Asikho isikhathi esibekiwe sokuthi ukuhlaselwa yisifuba somoya kuhlala isikhathi esingakanani. Njengesiqondiso, ungahle ube nokuhlaselwa yisifuba somoya okwemizuzu embalwa ngaphambi kokuba ukwazi ukulawula izimpawu zakho bese ziqala ukudamba.
Uma une-asthma enamandla, ukuhlaselwa yisifuba somoya kungahlala isikhathi eside, kusuka emahoreni kuye ezinsukwini. I-asthma enzima kunzima ukuyilawula futhi imvamisa ayiphenduli ngendlela efanayo emithini njenge-asthma emnene. Ukuhlaselwa yisifuba somoya kuyisimo esiphuthumayo kwezokwelapha futhi udinga ukucela usizo ngosizo oluphuthumayo ngokushesha.
Yini ebangela ukuhlaselwa yisifuba somoya?
Lapho uhlaselwa yisifuba somoya, izindlela zakho zomoya ziyancipha futhi kuba nzima kakhulu ukuphefumula. Ukuhlaselwa yi-asthma kungaqala kancane kancane kancane, ngokwesibonelo, uma izimpawu zakho ezijwayelekile zingalawulwa kahle noma uma ungasebenzisi i-inhalr yakho yokuvimbela njalo njengoba kufanele. Uma uthola okungenhla ukutheleleka komoya lapho-ke lokhu kungadala nokuhlaselwa yisifuba somoya.
Ezinye izinto ezingakwazi kubangele ukuhlaselwa yisifuba somoya kufaka phakathi ushintsho oluzumayo emazingeni okushisa nasesimo sezulu esibandayo, izinto ezithinta imvelo, izinto ezibangela ukungezwani komzimba kanye nengcindezi noma okunye ukudla neziphuzo.
Yiziphi izimbangela ezivame kakhulu zokuhlaselwa yi-asthma?
Izimbangela ezivamile zokuhlaselwa yisifuba somoya zifaka:
Ukuthintana nama-allergener, njenge-pollen, uboya bezilwane, isikhunta noma uthuli
Ukudla ukudla okuthile
Izici zemvelo, njengokungcola, ikhwalithi yomoya ompofu noma umoya obandayo
Ukuthatha imishanguzo yokulwa nokuvuvukala engeyona eye-steroidal, njenge-ibuprofen
Ukuthatha imithi efana ne-beta blockers
Ukucindezeleka noma imizwa eyeqisayo
Izimbangela zokudla kwesifuba somoya
Abanye abantu abane-asthma bathola ukuthi ukudla okuthile kungadala ukuhlaselwa. Lokhu kungaba ngenxa yokungezwani nokudla okuthile noma izithako ezithile. Uma une ukungezwani kokudla, kuvame ukuqala ngesikhathi sobuntwana.
Ukudla nakho kungadala izimpawu zesifuba somoya uma umuntu ezwela ekudleni noma kwizithasiselo zokudla, ezinjengezivimbelakuvunda.
Okunye kokudla okungadala izingqinamba kufaka:
Ukudla okuqukethe i-gluten, njenge-pasta noma isinkwa
Izinto zokuvikela ukudla ezifana nama-sulphites, ezitholakala eziphuzweni, ekudleni okufakwe emanzini anosawoti nenyama esetshenzisiwe.
Uma ucabanga ukuthi uhlaselwa yisifuba somoya ngenxa yokudla, gcina idayari yokudla. Lokhu kungakusiza ukuthi ubone iphethini bese uthola ukuthi yikuphi ukudla okungakudalela izinkinga. Khuluma nodokotela wakho ukuthola izeluleko ezengeziwe noma ukuthola mayelana nokuhlolwa kokungezwani komzimba.
Ungazigwema kanjani izimbangela zesifuba somoya
Uma wazi ukuthi ziyini izimbangela zakho ze-asthma, lapho-ke lapho kungenzeka khona, kuyasiza ukuzama ukukugwema.
Uma kukhona iselelesi esithile se-allergen osaziyo, ukugcina ikhaya lakho lihlanzekile futhi kungenaluthuli kungasiza. Isibonelo, ungacabanga ukushintshanisa okhaphethi ezitezi zokhuni ukunciphisa inani lokwakhiwa kothuli noma ukuqasha indawo yokuhlanza ukuze ungazivezi othulini lapho uhlanza.
Kungaba nzima kakhulu ukugwema izimbangela ze-asthma ngokuphelele lapho usemsebenzini, ikakhulukazi uma i-asthma yakho isebenza futhi ixhunyaniswe nendawo osebenza kuyo. Ezweni elihle, ungavele ushintshe imisebenzi uye kokunye okulungele impilo yakho, kepha empeleni lokhu akwenzeki ngaso sonke isikhathi.
Yazisa umqashi wakho noma umnyango wakwa-HR ngesifo sakho somoya. Kufanele ukwazi ukuxoxa ngezinketho ezitholakalayo zokwenza indawo osebenzela kuyo ukuthi ifanele izidingo zakho.
Ukuhlala phezu kohlelo lwakho lokuphathwa kwesifuba somoya, ukusebenza eceleni kukadokotela wakho noma umhlengikazi wesifuba somoya futhi uqiniseke ukuthi uthatha ama-inhalers akho noma eminye imishanguzo ye-asthma kufanele isize ukulawula izimpawu zakho. Ukwenza izinqumo ngendlela yokuphila kubalulekile futhi, njengokudla ngendlela enempilo, ukuzivocavoca umzimba nokungabhemi.
Kungasiza futhi ukufunda i inqubo yokuphefumula i-asthma. Kunezindlela ezahlukahlukene zokuphefumula ezingasiza i-asthma nokwazi ukuphefumula kahle kungasiza uma okuthile ngokungalindelekile kubangela ukuhlaselwa.
Uzothola ulwazi oluthe xaxa mayelana nokungezwani komzimba nesifuba somoya kwiwebhusayithi yethu, futhi siyethemba ukuthi uzoyihlola. Nawe unga thintana nathi - singathanda ukuzwa kuwe!